अनूदित कथा : हरिचरण - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कथा : क्याण्टोनमेण्टको घेरामा
कविता : रगत जस्तो रातो देखिन्न ! →
अनूदित कथा : हरिचरण
~शरत् चन्द्र चट्टोपाध्याय~
यो धेरै दिन पहिलेको कुरा हो । प्रायः दश-बाह्र वर्षघिको कुरा । त्यतिबेला दुर्गादास बाबू वकील हुनुभएको थिएन । दुर्गादास बन्धोपाध्यायलाई सायद तिमी राम्ररी चिन्दिनौ होला, म राम्ररी चिन्छु । आऊ, आज उनको परिचय गराउँछु ।
बाल्यकालमा कहीँबाट एउटा अनाथ पितृमातृविहीन कायस्थ बालकले रामदास बाबूको घरमा आश्रय लिएको थियो । सबैजनाले भन्थे बालक असाध्यै राम्रो छ । राम्रो, सुन्दर र बुद्धिमान् सेवक, दुर्गादास बाबूको स्नेहको पात्र ।
सबै कामहरू ऊ आफ्नै सम्झेर गर्छ । गाईलाई घाँसपानी दिनेदेखि लिएर बाबूलाई तेल लगाउनेसमेत ऊ आफैँ गर्न चाहन्छ । सधैँ व्यस्त रहन उसलाई मन लाग्छ ।
बालकको नाम हरिचरण । गृहिणी प्रायजसो उसको कामबाट विस्मित हुनुहुन्थ्यो । बेलाबेला हकार्नुहुन्थ्यो, र भन्नुहुन्थ्यो- हरि, अरू पनि त नोकरहरू छन्, यति धेरै किन खट्छस् – हरिको दोषमध्ये एउटा थियो – हाँस्ने । उसलाई हाँस्न साह्रै राम्रो लाग्थ्यो ∕ हाँसेर उत्तर दिन्थ्यो- आमा, हामीहरू गरिब मान्छे, सधैँ खट्नैपर्छ र फेरि बसेर मात्रै पो के हुन्छ र ?
यस्तै खालको व्यवहारमा, सुखमा, स्नेहको काखमा हरिचरणको लगभग एक बर्ष बित्यो ।
सुरो रामदास बाबूकी कान्छी छोरी । सुरोको उमेर अहिले पाँच/छ वर्षहोला । हरिचरणसँग सुरोको निकै आत्मीयता देखिन्थ्यो । दुग्धपानको बेलामा सुरोले गृहिणीसँग द्वन्द्वयुद्ध गर्थी, जब आमाले अनेक अनावश्यक झगडा गरेर पनि यी सानी कन्यालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुहुन्नथ्यो र दुग्धपानको विशेष आवश्यकता र त्यसको अभावमा कन्यारत्नको छिट्टै प्राणवियोग हुने शङ्कामा विषम क्रोधमा सुरबालाका दुई गालामा चिमोटेर पनि उसलाई दूध खुवाउन सक्नुहुन्नथ्यो, तब हरिचरणका कुराबाट विशेष लाभ हुन्थ्यो ।
होस्… धेरै कुरा बकेँ । खास कुरा अब भन्छु सुन ।…सुरोले हरिचरणलाई माया गर्थिन् ।
दुर्गादास बाबू जब बीस बर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यस बेलाकै कुरा भन्दैछु । त्यस बेला दुर्गादास बाबू कोलकातामा पढ्नुहुन्थ्यो । घर आउनुपर्दा स्टिमरमा दक्षिणतिर गएर, त्यसपछि दस-बाह्र कोस पैदल आउनुपर्थ्यो, त्यसकारण बाटो सहजगम्य थिएन । त्यसैले दुर्गादास बाबू धेरैजसो घर जानुहुन्नथ्यो ।
छोरो बी.ए. पास गरेर घर आएको छ । आमाठकुरानी अति व्यस्त । छोरालाई राम्ररी ख्वाउन-प्याउन, यत्‍न-आत्मीयता गर्नमा नै सम्पूर्ण घर एकैसाथ उत्साहित भएको छ ।
दुर्गादास बाबूले सोध्नुभयो, आमा, यो केटो को हो ?’
आमाले भन्नुभयो, यो एउटा कायस्थको छोरो, आमाबाबु छैनन्, त्यसैले घरमूलीले उसलाई आफैँ राख्‍नुभएको । नोकरका क्रियाकलाप जम्मै गर्दछ, अनि एकदम शान्त छ र कुनै कुरामा पनि रिसाउँदैन । बिचरा आमाबाबु छैनन्, त्यसमाथि केटाकेटी नै, म यसलाई धेरै माया गर्छु।
घर आएर दुर्गादास बाबूले हरिचरणको यो परिचय पाउनुभयो ।
जे होस्, आजकल हरिचरणको धेरै काम बढेको छ । त्यसबाट ऊ असन्तुष्ट छैन, बरु सन्तुष्ट नै छ । साना बाबूलाई (दुर्गादास बाबू) स्नान गराउनु, चाहिएको जति पानी करुवामा राख्‍नु, ठीक समयमा पानको डिब्बा ठीक पार्नु, उपयुक्त अवसरमा हुक्का
इत्यादि जोगाड गर्न हरिचरण एकदम पटु छ । दुर्गादास बाबू प्रायः सोच्नुहुन्छ केटो इन्टेलिजेन्ट नै छ । त्यसैले कपडा पट्याउनु, तमाखु सजाउनुजस्ता काम हरिचरणले नगरे, दुर्गादास बाबू मन पराउनुहुन्न ।
म केही बुझ्दिनँ, कहाँको पानी कहाँ पुग्ने हो, के थाहा – एकपल्ट दुई जना रुँदैरुँदै बसेका थियौँ, ठूलो कठिनाइको समयमा । मलाई लाग्छ, सबै ठाउँमा यही कुरा लागू हुन्छ । देख्छ्यौ ? राम्रोसँग राम्रै बस्छ, नराम्रो कहिल्यै आएर बस्दैन। यदि देखेकी छैनौ भने, हेर, आज तिमीलाई देखाउँछु – ठूलो दुरूह तत्त्व ।
उपर्युक्त कुरा सबैजनालाई बुझ्न सम्भव पनि छैन, दरकार पनि हुन्न र मेरो पनि यो फिलोसफी लिएर डिल गर्ने उद्देश्य छैन । त्यसै पनि आपसमा दुईवटा कुरा गर्दा के नोक्सान छ र ?
आज दुर्गादास बाबूलाई भोजमा निमन्त्रणा छ । घरमा खानुहुन्न, सम्भवतः राति अबेला फिर्नुहुन्छ होला । यिनै सब कारणले हरिचरणलाई नित्यकार्य सम्पन्न गरेर सुत्‍न भन्नुभएको छ ।
दुर्गादास बाबू बाहिर बस्ने कोठामा नै सुत्‍नुहुन्थ्यो । यसको कारण धेरैलाई थाहा छैन । मलाई लाग्छ आफ्नी जहान पिताको घरमा बस्दा, उहाँलाई बाहिरी कोठामा सुत्‍नु नै उचित लाग्छ होला ।
अब हरिचरणको कुरा भनौँ । राति दुर्गादास बाबूको ओछ्यान तयार पार्ने, वहाँ सुतेपछि वहाँको पदसेवा इत्यादि काम हरिचरणको थियो । पछि प्राकृतिक रूपमा निद्रा परेपछि हरिचरण छेउको कोठामा सुत्‍न जान्थ्यो ।
बेलुका छिट्टैदेखि हरिचरणको टाउको टनटन गर्न थाल्यो । हरिचरणले बुझ्यो अब जरो आउन धेरै बेर छैन । बीचबीचमा प्रायः नै उसलाई जरो आइरहन्थ्यो । त्यसैले यी सबै लक्षणहरू उसलाई विशेष थाहा थिए । हरिचरण अरू बस्न सकेन र कोठामा गएर सुत्यो । साना बाबूको ओछ्यान तयार भएन, यो कुरा फेरि उसको मनमा रहेन । राति सबैले खाना खाए तर हरिचरण आएन । गृहिणी हेर्न आउनुभयो । हरिचरण सुतिरहेको थियो । शरीर छामेर हेर्नुभयो, एकदम तातो लाग्यो । बुझ्नुभयो जरो आएको छ, त्यसैले उसलाई दुःख नदिई फर्केर जानुभयो ।
रातको करिब दोस्रो प्रहर । भोज खाएर दुर्गादास बाबूले घर आएर देख्‍नुभयो ओछ्यान तयार छैन । निद्राको नशा, त्यसमाथि समस्त बाटाभरि घर गएर चित भई सुत्‍ने, अनि हरिचरणले थकित गोडाहरूलाई हल्काहल्का मालिस गर्दै मिच्नेछ र यही सुखमा अल्पतन्द्रामा हुक्काको नली मुखमा लगाएर निदाउने र एकैपल्ट प्रभात भएको हेर्ने आदि कल्पना गर्दै आउनुभएको थियो ।
अचानक हतास भएर विषम अग्निमा जल्नुभयो, महाक्रुद्ध भएर दुई चारपल्ट चिच्याउनुभयो “हरिचरण ! हरि ! हरे…!” तर हरि खोई ? ऊ जरोको प्रकोपले संज्ञाहीन भएर सुतेको छ । त्यस बेला दुर्गादास बाबूले सोच्नुभयो- केटो सुतेको होला । कोठामा गएर हेर्नुभयो, राम्ररी बेरिएर सुतेको छ ।
अब सह्य भएन । एकदम जोडले हरिको कपाल समातेर उसलाई बसाउने प्रयास गर्नुभयो, तर हरि फेरि ढलेर ओछ्यानमै सुत्यो । तब विषम क्रुद्ध भएर दुर्गादास बाबूले हित-अहित बिर्सनुभयो । हरिको पिठयूँमा बूटसहित लात बजार्न थाल्नुभयो । यो कठोर प्रहारबाट चेतनालाभ गरी हरि उठेर बस्यो । दुर्गादास बाबूले भन्नुभयो- “के हो केटा ! सुतेको छस् ! ओछ्यान म स्वयंले मिलाउनुपर्ने ?” कुरैकुरामा क्रोध अझै बढ्यो र हातमा भएको बेतको लठ्ठी हरिको पिठ्यूँमा दुई तीनेकपल्ट बर्से।
हरिले राति पदसेवा गर्दा, एक थोपा तातो आँसु सायद दुर्गादास बाबूको छालामा परेको थियो ।
रातभरि दुर्गादास बाबूलाई निद्रा लागेन । एक थोपा आँसु साह्रै तातो लागेको थियो । दुर्गादास बाबू हरिचरणलाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो । उसको नम्रताको कारण ऊ दुर्गादास बाबूको मात्र हैन, सबैको प्रियपात्र थियो । विशेष यो करिब एक महिनाजतिमा घनिष्टता अझ बढेको थियो ।
राति दुर्गादास बाबूलाई कतिपल्ट लाग्यो, एकपल्ट हेरेर आऊँ कति लागेछ, कति फुलेछ । तर ऊ त नोकर, यो कुरा राम्रो देखिँदैन । कतिपल्ट मनमा आयो एकपल्ट सोधेर आऊँ, जरो घट्यो कि घटेन । तर यसमा पनि लज्जाबोध हुन्छ, बिहानीपख हरिचरणले मुख धुने पानी ल्याइदियो, तमाखु सजाइदियो । दुर्गादास बाबूले त्यतिबेला पनि- बिचरा, ऊ त बालकमात्र, त्यस बेला तेह्र वर्षपनि नकाटेको । बालक भनेर एकपल्ट छेउमा तानेर हेरेको भए, बेतको आघातबाट कस्तो रगत जमेको छ, र जुत्ताको काठले कस्तो शरीर फुलेको छ हेरेको भए ? बालकसँग केको लाज ?
करिब नौ बजे कहींबाट एउटा टेलग्राम आयो । टेलिग्राको खबरले दुर्गादास बाबूको मन झन् विचलित भयो । खोलेर हेर्नुभयो- जहानलाई बिसन्चो । धडाम्म छाती एक हात तल भासियो । त्यही दिन वहाँलाई कोलकाता आउनुपर्ने भयो । गाडीमा चढेको बेला सोच्नुभयो- हे भगवान्, कसरी प्रायश्चित्त गरूँ ?
एक महिनाजति भयो होला । दुर्गादास बाबूको मन एकदम प्रफुल्ल छ । वहाँकी जहान यसपल्ट बाँच्नुभयो । आज केही खानुभयो ।
घरबाट आज एउटा पत्र आएको छ । पत्र दुर्गादास बाबूका कान्छा भाइको । तल एक ठाउँ पुनश्चः लेखेर भनेको छ- साह्रै दुःखको कुरा, हिजो बिहान दस दिनको जरोपछि हाम्रो हरिचरणको मृत्यु भयो । मर्नुअघि उसले तपाईँलाई धेरैपल्ट हेर्न चाहेको थियो । कठै,मातृपितृहीन अनाथ !
बिस्तारैबिस्तारै दुर्गादास बाबूले पत्रलाई सयौँ टुक्रा पारेर फ्याल्नुभयो ।
(स्रोत : Kumud Adhikari’s Blog)
विधा : अनूदित कथा | Kumud Adhikari, Sarad Chandra Chattoupadhyay. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।